News Collection: फेसबुकबाट आफ्ना सामाग्री कसरी डाउनलोड गर्ने?
फेसबुकबाट आफ्ना सामाग्री कसरी डाउनलोड गर्ने?
डाउनलोड गर्न के गर्नुपर्छ त ? सुरुमा फेसबुकको दायाँ छेउमा भएको एकाउन्टमा क्लिक गरी एकाउन्ट सेटिङ्ग्स रोज्नुपर्छ। त्यसपछि खुल्ने पेजको सबैभन्दा मुनि डाउनलोड योर इन्फरमेसनको लिङ्क हुन्छ। त्यसको नजिकै रहेको लर्न मोरमा क्लिक गरेपछि तपाईँले आफ्नो जानकारी डाउनलोड गर्ने प्रक्रिया थाल्न सक्नुहुन्छ। (एजेन्सी)